Toshiba vaongorori vakagadzira huwandu hwehuwandu hwavanoti haugone kubira | Linux Vakapindwa muropa
Toshiba (chimwe chezvinhu zvinorema munyika yehunyanzvi) yakazivisa vhiki ino kuti yakabudirira kufambisa huwandu hwehuwandu pamusoro pefibre optics Makiromita mazana matanhatu pakureba.
Kambani vaongorori gadzira rekodhi nyowani rekodhi uye wakazivisa ramangwana idzva remahombekombe ehuwandu hwehuwandu Ivo vanogona kutumira ruzivo rwakachengeteka pakati pemaguta uye kunyangwe nyika. Aya masayendisiti akaratidzira kuti anokwanisa kuendesa huwandu hwezvakawanda pamusoro pemazana emakiromita eofiber fiber pasina kukodha iyo isina kusimba yehuwandu hwehuwandu hwakamanikidzwa mune zvidimbu.
Maererano navo, chikonzero chekubudirira kwacho kuri nekuda kwetekinoroji nyowani inosimudzira kushanduka kwenzvimbo izvo zvinoitika mu fiber. Uku kuwanikwa kunogona kuenda nenzira yakareba mukugadzira chinotevera-chizvarwa huwandu hweInternet, iyo masayendisiti anotarisira kuti rimwe zuva ichafamba madaro epasirese.
Kuti utsungirire nemamiriro asina kugadzikana mukati memaziso efaera, vatsvakurudzi veToshiba Vakagadzira nzira nyowani inonzi 'dual band stabilization'. Iyo nyowani hunyanzvi inotumira maviri eanowonekera mareferenzi masaiti akasiyana wavelengths, ichideredza jitter mune refu tambo
Yekutanga wavelength inoshandiswa kudzima nekukurumidza kushanduka, nepo iyo yechipiri, iyo iine iyo yakafanana wavelength seye optical qubits, inobvumira chikamu kugadzirisa.
Vatsvakurudzi vakawana kuti zvaive zvichikwanisika kuchengetedza iyo oparesheni chikamu chenguva dzose yequantum chiratidzo pachikamu chewavelength, ine huchokwadi hwemakumi mashoma emaanometer, kunyangwe mushure mekupararira kuburikidza nemazana emakiromita efaera. Kana uku kushanduka kusingabhadharwe munguva chaiyo, iyo fiber inowedzera uye zvibvumirano zvichienderana nekusiyana kwekushisa, kunoisa ruzivo rwehuwandu.
Una kwekutanga kwekushandisa kweiyi tekinoroji mune chaiko nyika ichave kugoverwa kwequantum kiyi (QKD) pamusoro penzvimbo refu. Sekureva kweshoko rakaburitswa naToshiba svondo rapfuura, masisitimu eQKD ekutengesa parizvino akaganhurirwa kutenderedza 100-200km ye fiber optics. Boka rekambani yekutsvaga rakatoshandisa tekinoroji yayo kuyedza QKD padaro refu.
Protocol inovimba nequantum network kugadzira makiyi akachengeteka asingakwanise kubiwa, zvichireva kuti vashandisi vanogona kuchinjanisa zvakachengetedzeka ruzivo rwakavanzika, senge zvirevo zvebhangi kana marekodhi ekurapa, kuburikidza neyakavimbika nzira yekutaurirana, seInternet.
"Mumakore achangopfuura, QKD yanga ichishandiswa kuchengetedza ma metro network. Uku kufambira mberi kwazvino kunowedzera kusvika kwakawanda kwehuwandu hwehuwandu, kuitira kuti maguta agone kubatanidzwa munyika dzese nemakondinendi, pasina kushandisa epakati node dzakavimbika. Yazadzikiswa neQKD kuburikidza nesatellite, ichatibvumidza kuvaka network yakachengetedzeka yepasi rose, "akadaro Andrew Shields, Director weQuantum Technologies kuToshiba Europe.
Panguva yekutaurirana, iyo QKD inoshanda nekuita imwe yemapati maviri encrypt data nekukodha iyo cryptographic kiyi mune makubiti uye kutumira aya maububvu kune rimwe bato kuburikidza nequantum network. Nekudaro, nekuda kwemitemo yequanum mechanics, hazvigoneke kuti musori abate ma qubits asina kusiya evesdrop inoonekwa kune vashandisi, vanogona kutora matanho ekudzivirira ruzivo, maererano nechikwata cheToshiba.
Kusiyana neyechinyakare cryptography, QKD haina kuvakirwa pane masvomhu kuomarara kwekuchengetedza kiyi resolution, asi yakavakirwa pamitemo yefizikiki. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe iwo makomputa ane simba kwazvo aisakwanisa kubaya makiyi-akavakirwa makiyi. Saka zviri nyore kuona kuti sei zano iri richikwezva kufarira kwevatambi kubva kumarudzi ese ehupenyu, kubva kumasangano emari kusvika kumasangano enjere.
Tsvagurudzo yaToshiba yakapihwa mari shoma neEuropean Union, kuratidza kufarira kukuru mukusimudzira kwehuwandu hwekutaurirana. Panguva imwecheteyo, chirongwa cheChina chekupedzisira chemakore mashanu chinoisawo kwakanyanya kusimbisa manhamba ehuwandu, nepo United States ichangoburitsa chirongwa chehunyanzvi icho chinoburitsa nhanho-nhanho gwara rekumisikidza huwandu hwepasi rose hweInternet.
Iyo yeinternet internet inotarisirwa kugonesa mashandisiro asingagone neanhasi webhu kunyorera Uye izvi zvinobva kuchizvarwa chekushomeka-kwehunyanzvi kutaurirana kusvika mukugadzirwa kwemapoka akabatana euwandu hwemidziyo iyo, pamwe chete, inogona kudarika simba rekomputa yezvigadzirwa zvakajairika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Toshiba vaongorori vakagadzira huwandu hwehuwandu hwavanoti haugone kubira
Iwe unofanirwa kunyengera zvakanyanya kusimbisa chinhu chakadai. Iko hakuna, uye hakuchazombovepo, hapana chinhu chisingakwanise kubiwa, hapana chimwe chingabviswe, asi kana mumwe munhu achifarira chaizvo, vanozozvibaya muna 0.5.